Ukhanyiso sisixhobo esikhethekileyo sokuphinda ubambe iifoto | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Instagram yintanethi yenethiwekhi ngaphandle kokuba nezinto ezibonakalayo kwimithombo yeendaba zentlalo, ikwanika iinketho ezinomdla kakhulu zokufumana kwakhona ifoto, ngakumbi kweziphi iifilitha zayo ezizodwa.
Kodwa ukuba umntu ufuna ukubanakho ukubanakho kwezona zinto zihambele phambili kwifowuni yabo ye-iOS, kuya kufuneka basondele kwezinye usetyenziso olufana nokuKhanyisa. Isikhanyiso sisicelo sokuthi xuba i-digital retouching kunye neefilitha ukuthatha ukuhlelwa kweefoto ukuya kwelinye inqanaba kwisixhobo esiphathwayo njenge-iPhone.
Sithetha ngayo usetyenziso olukhethwe njengolunye lonyaka ka-2015 kwiVenkile yeApple kumazwe afana ne-United Kingdom, Germany, Australia, Canada okanye France, kwaye ezimele ukuba zikhethe izinto ezisisiseko njengokucoca okanye ukufaka izihluzi, ukuya kwezinye ezinomdla njengokulawula kakuhle ithoni, umbala kunye neenkcukacha.
Eminye imisebenzi ekhethekileyo ihamba nge Umsebenzi wemaski, Ukuveliswa kwakhona kwesitayile seekhamera zeklasikhi, iithowuni ezimbini zeethowuni okanye ukongeza iziphumo ze-monochrome. Yinkqubo enezinto ezimbalwa ezahlulahlulahlula abanye kwiVenkile yeApple njengePixlr enkulu.
Kananjalo asinakulibala malunga neyakhe isixhobo sokunciphisa ingxolo, Guqula izinto ezithile kwifoto okanye ukhetho lwabo lokutshintsha-tshintsha olwenza isiphumo sokubetha ukuba uyayazi indlela yokuphinda wenze ezo zinto zikhethiweyo.
Isicelo esikhethekileyo ukuze umsebenzisi akwazi fumana ezona ziphumo zibalaseleyo xa uthatha isigqibo sokuphinda ubeke izinto ezithile kwifoto ethathwe nge-iPhone yakho.
Ixabiso layo kwiVenkile yeApple IRandi ye3,99 Kwaye ngoku yenye yezona ndlela zibalaseleyo zokuphinda ubambe iifoto kwisixhobo se-iOS njenge-iPad okanye i-iPhone. Ke, ukuba ubukhangela iapp enjalo, sukucinga ngayo kakhulu, awuyi kuphoxeka.
Khuphela ukukhanya kwi-iOS
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Isikhombisi sisixhobo esinamandla sokuphinda ubambe ifoto kwisixhobo sakho se-iOS